Ordinary gel ipeni, okuyinto nsuku zonke izisebenzi zasemahhovisi, abafundi ezikoleni nasemanyuvesi, futhi ithuluzi elikahle kakhulu umdwebo. Ihluzo gel ipeni has a inzuzo enkulu: iphethini ecacile eyatholakala futhi elihlale. Nakuba ngakolunye uhlangothi, imivimbo sula irabha ungenisa kahle ngeke zisebenze. Njengoba izintengo isibambo ongaphakeme, bese udweba kubo inzuzo ngempela nangokwezimali. ihluzo okuhlobisa ngu gel izibaya kungaba kwalokho eliyingqayizivele futhi ezithakazelisayo ekhaya Decor.
abaculi Abangenalwazi abenza nje ngifuna yena emkhakheni umdvwebo, kuhambisana kahle black gel izibaya. Bazokusiza ukwenza ukudweba ocacile eyinkimbinkimbi. Ihluzo gel ipeni kubaculi abasafufusa ayiyona inkimbinkimbi e ukubulawa, kubalulekile kuphela okufanele zicatshangelwe ezinye izici.
Kunezindlela ezahlukene ukusingatha ingcindezi ephepheni. Ukuze uthole umugqa okuqhubekayo mncane, kufanele usebenzise ingcindezi oqondile. Isibambo ibekwe perpendicular iphepha futhi agcinwe umugqa oqondile. Le ndlela kuyinto ephelele ngokudweba wabuka. Ungenza umdwebo ngokuchofoza ithuluzi engela. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka imivimbo buthuntu. Uma ngale ndlela umngcele kwelinye direction, kungenzeka ukwakha ukuhwebelana halftone. imigqa Awela ukusiza ujulisa futhi uqinise ezindaweni isithunzi.
Iphepha futhi oyiyo
Ukusebenzisa le ndlela umdwebo, ipeni ihluzo ijeli, kubalulekile ukuba acabangele isakhiwo leliphepha. Lapho ekhetha bushelelezi iphepha umugqa kuyoba sobala futhi abushelelezi. Uma upende phezu anolaka, i line ngeke ujike esifushane futhi discontinuous.
Ukuba singenzi amaphutha ebulalayo emsebenzini, kudingeka siqale ukudweba dlela ezivamile graphite ipensela. Khona-ke oversights encane angasuswa irabha. Kuyadingeka ukuba wenze lokhu inqubo ngemuva zonke izingxenye trace ukusingatha. Kuyadingeka ukuba ulinde kuze isithombe yome ngokuphelele. Lines ukuthi zisetshenziswa gel ipeni, ngokuyisisekelo babe ukushuba ofanayo. It kuncike ububanzi induku. Ukudweba imigqa eqine ezahlukene ingakhetfwa ukusingatha ezahlukene bead diameters. Nakuba umdwebo kungcono ukusebenzisa inani gel amapeni kusukela udayi ezahlukene babe kwabantu ezahlukene. Ngenxa yalokho, ungathola ezihlukahlukene umugqa ukugcwaliswa, ukudala nomphumela eliyingqayizivele.
Noma yini kungenziwa shi esebenzisa amasu anjengebalazwe gel ipeni schedule. Amaphethini, isibonelo, etholakala nje kumnandi. Lapho ukugwala amaphetheni izimo zivuma ayifake ephepheni cishe kunoma iyiphi fantasy. Ukuze uthole isithombe soqobo kanye engavamile, kubalulekile ukusebenzisa ezingaphezu kweyodwa gel ipeni. Uma wayefisa, ungakwazi ukwengeza iphethini nemibala ukuthatha anemibala gel izibaya. Uma umcabango ivumela umculi ukuba bahlakazeka ephepheni bese udweba iphethini okukhethekile, nobukhulu inethiwekhi ukhetho olukhulu amaphethini ehlukene nemihlobiso ukunikeza. Lezi zithombe ingabonwa, ukuhlanganisa, ekugcineni ukudweba okuthile eyabo, umane sithembele izithombe ezikhethiwe. Noma nje ukugxila kwelinye iphethini futhi srisovat kuye kuphela. Kunoma ikuphi, isithombe zaphumela amahle ezithakazelisayo.
Inkantini gel izibaya ngokuvamile awugqinsi, okuvumela umculi ukupenda iphuzu indlela ongavamile ngokuthi dotvork. Kusukela amathuluzi ezinemibala njalo upende akukuhle kakhulu, ihluzo gel black ipeni kuyoba acebile kakhulu futhi kangcono. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi unama gel ivame yome ngokushesha, ngakho induku kumele sisetshenziswe phakathi namasonto ambalwa, kungenjalo iyeke ukudweba. Graphics, isicelo ne black gel ipeni, a ucwebezela ngendlela ekhangayo encane elahlekile futhi umthunzi emva kwezinsuku 2-3 emva yamaphetheni. Sebenzisa umugqa ephepheni kubalulekile kakhulu ngokucophelela, ngoba ngeke ukubabulala. Kubalulekile futhi ngeke akukhohlwe lokho thinta umdwebo siphelile akunakwenzeka, ngoba ijeli lenzelwa phezu kobuso ephepheni.
Yini enye kubalulekile ukukhumbula?
Ihluzo gel ipeni ngeke sisetshenziswe ngokuhambisana isikhundla villi ishidi, isb phansi. ingxenye ukubopha ayikwazi wathinta ngomunwe wakho, noma ungakwazi ukushintsha saturation emigqeni. Kungcono ukukhetha iphethini iphepha nge high density, futhi ukusebenza ingcindezi ukukhanya, ngoba unama gel unekhono "ukudonsa" uhlu. Esimeni amaphutha angathí sina ngesikhathi Umdwebo, okuyinto umane kumele zisuswe, sebenzisa omhlophe noma ezinye coating yama-materials. Kumelwe sikhumbule ukuthi esibayeni ihluzo gel kudinga ngokunemba kanye nokunemba umdwebi. Yiqiniso, okokuqala ungathola kakhulu eliphezulu isithombe. Kepha konke kuvela abanolwazi. Ngokuhamba kwesikhathi, amaphethini ziyacaca, futhi kuyobenza bazizwe isandla ngiqiniseka yinkakha izikebhe wakhe.
Izikhangibavakashi Strasbourg. Cathedral Strasbourg. Likuphi Strasbourg
Inombolo ye-akhawunti yakho: lapho ukubheka, kwenzeka kanjani nokunye
Salmonella tifimurium - lwegciwane, uphethwe, ukuphathwa
Novosibirsk Conservatory: Isifinyezo, amakhonsathi, amaqembu umfundi, imincintiswano